န်ဆောင်မှုများ – 360 OpenPlotter
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ 360 Photographer Agency
အတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအားဖြင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့စီမံချက်၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမြင်များကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, အဖြစ်အပျက်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခြင်း. အဘယ်သူမျှမကိစ္စကြောင့်ဥစ္စာမင်္ဂလာဆောင်, လှေသို့မဟုတ်အဆောက်အဦး, ပင်ဝေဟင်ရှုခင်းများ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံဆရာကအနည်းဆုံး 4K resolution နဲ့များနှင့်အပြည့်အဝစွဲငြိဖွယ်ရာဓါတ်ပုံများအောင် 360. သူတို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ၌မိမိတို့အလုပ်အားလုံးကိုဆုရရှိသူများမှာ. ကျွန်တော်တို့၏ 360 ဓာတ်ပုံဆရာက Google ယုံကြည်စိတ်ချနှင့်အထူးအခွင့်အရေးနဲ့သူတို့ရဲ့ရှေးခယျြသောနေအိမ်မြို့ကြီးများ၏ဝှက်ထားဒေသများသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိနေကြသည်. သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်ပုံဟာအပ်လုပ်တင်ထားသည်များက Google အတွက်ပထမဦးဆုံးရာထူးယူ. တစ်ခုချင်းစီကိုဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦးသန်းတဦးတည်းအပေါ်အမြင်များရှိပါတယ်. ဥစ္စာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်သေပြနည်းလမ်းများနှင့်ပုံရိပ်နှင့်အတူအဆင့် Google Maps တွင်ပထမဦးဆုံးအရာအရပျယူနိုငျ.
ဥပဒေရေးရာပျံသန်းမှုခငြ့်အရေး & စာရွက်စာတမ်း
အစိုးရများနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်အတူအားလုံးဥစ္စာထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်များကိုဖကျြဆီးနိုငျ. အထူးကျွန်တော်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်ဝေဟင်ဓာတ်ပုံများအကြောင်းပြောဆိုလျှင်. In this example you see our Certificate of Identification of one of our registered drones in Romania. ကျနော်တို့ဒေသခံအော်ပရေတာအခြေစိုက်ပါပြီ. ဤစာတမ်းသည်တစ်ဦးကိုချွတ်ယူမယ့်လေယာဉ်နှင့်လေယာဉ်ကဲ့သို့သောဆင်းသက်တူသောခွင့်ပြု. တစ်ခုချင်းစီကိုချွတ်ယူတာဝန်ရှိသူတဦးကမှတ်ပုံတင်နဲ့ခွင့်ပြုချက်ရတယ်နေသည်. ဤစာတမ်းသည်ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံကိုလုပ်ခွင့်ပြုမထားဘူး. ဤကွဲပြားခြားနားသောဥပဒေများနှင့်အစိုးရဌာနများတည်ရှိ.
နေဆဲညီကြသည်မဟုတ်. ပြစ်ဒဏ်များကိုသင်ကုန်ကျနိုင်ပါတယ် 20000 အကျဉ်းထောင်မှတက်ယူရို. ကျနော်တို့ဥရောပ၌သင်တို့အဘို့အစည်းရုံးကတော့ flightrights နှင့်ဥပဒေရေးရာစာတမ်းများ. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းတွင်သင်နှင့်သင်၏ဥစ္စာအော်ပရေတာကိုတင်ထားရန်လည်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဥပဒေရေးရာပျံသန်းနိုင်သော. ဤပုံစံကိုမကြာခဏအရေးတကြီးကိစ္စများတွင်သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေရေးရာဓာတ်ပုံများကိုထုတ်လုပ်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းခရီးသွားဧည့်သဖြင့် TV မှာဘဏ်ဍာအသုံးပြုသည်. အစောပိုင်း frontto အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးပါသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်ဆွေးနွေးရန်.
Idea: Zeitreise /Time Journey အားဖြင့် Tocan-Tweezer.org